Warbixin Sanadeedka 2020 | Nooca qoraalka cad - Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado > Maxaa kucusub CIRC > Warbixin Sanadeedka 2020 | Qoraal Qoraal ah
Warbixintayada kala soo deg foomka PDF U beddelo nooca sawirka
Bulshada sharafta leh ee CIRC,
In dib loo jaleeco sanadka 2020 waa in si qoto dheer oo xanaaq leh loo arko waxa na kala qaybinaya - iyo sida aan isugu nimaadno inaan is daryeelno - Colorado iyo waddankeenna. Markaan ka soo baxno (rajo ahaan) aafada guud ee adduunka iyo weerarada joogtada ah ee ka dhanka ah muhaajiriinta oo astaan ​​u ahaa Maamulka Trump, waxaan ku aragnaa awood iyo qurux aad u badan bulshadeena maadaama ay ka jawaabayaan sinaan la’aanta qaabdhismeedka ah ee aan ku sii noolaanno gudaha. "Caddaaladda dadka oo dhan" ayaa wali u muuqata soogalootiga, iyo gaar ahaan muhaajiriinta Madow iyo Brown, laakiin bulshooyinkeennu waxay sii wadaan inay dhisaan codkooda iyo hoggaankooda.
2020 tijaabiyey CIRC. In kasta oo xanuunka luminta ehellada aafada iyo dhibaatada dhaqaale ee ay ku kacday, shaqaalahayaga, xubnaheenna iyo guddigayaguba waxay u kaceen caqabadaha sanadka. Waxaad ku arki doontaa warbixintan gudaheeda dadaalka geesinimada leh ee joogtada ah ee urur si qoto dheer uga go'an in midba midka kale sare u qaado, isxilmeeyo midba midka kale iyo bulshooyinkeena, iyo isbadal si looga faa'iideysto soo galootiga iyo dhamaanteen. Waxaan nahay oo dhan tan dhexdeeda, weligeenna ma hilmaami karno taas.
Waxaan ku faraxsanahay wixii aan soo qabannay, iyo wixii xubnaheennu ka qabteen gobolladooda ku teedsan gobolka. Midkoodna waxa aan u shaqeyneyno kaligood kuma dhacaan. Aad ayaan ugu mahadnaqeynaa wada-hawlgalayaasha bulshada ee aan sida dhow ula shaqeyno, iyo deeq-bixiyeyaasha iyo maal-galiyeyaasha taageera shaqadeenna.
Xitaa markaan isku diyaarinayno inaan u dabaaldegno sanadguuradii 20-aad ee CIRC ee 2022, waxaan si farxad leh maskaxdeena, jidhkeenna iyo qalbiyadeenaba ugu dhiibnay shaqada dhismaha caddaaladda dadka soogalootiga ah, oo ay hoggaaminayaan kuwa si toos ah u saameynaya siyaasadaha aan u shaqeeyno. Waad ku mahadsantahay dantaada iyo taageerada CIRC!
Lant Adelante! Guusha
Lisa Duran, Agaasimaha Fulinta, iyo Jossy Martinez, Madaxweynaha Guddiga
U Dagaalan Horumar
Laga soo bilaabo 2002, waxaan dhisnay cod mideysan si aan u difaacno una hormarino cadaalada dhamaan muhaajiriinta iyo qaxootiga ku sugan Colorado iyo Mareykanka.
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado (CIRC) waa isbahaysi ku saleysan xubinnimada gobolka oo dhan oo ah soogalooti, ​​caqiido, shaqo, dhalinyaro iyo ururada xulafada la ah. Waxaan ku hormarineynaa cadaalada soogalootiga iyada oo loo marayo dhisida awooda, ka qeyb qaadashada shicibka ee aan ka tirsaneyn, isgaarsiinta istiraatiijiga ah, difaacida xariga xaq darada iyo tarxiilka, iyo ku guuleysiga siyaasadaha dadweynaha ee cadaalada iyo aadanaha.
Cadaaladdu ma dhacdo oo kaliya. Waa loo dagaallamay waana lagu guuleystay, waxaana naga go’an inaan u dagaallano cadaaladda illaa dhamaadka.
Ka bixitaanka Codbixinta
Sanadka 2020, waxaan go'aansanay inaan u wareejino dhamaan howlaha ka qeyb qaadashada codbixiyaasha hay'ada aan wada shaqeynta leenahay CIRC Action Fund si aan u dhisno ujeedadeeda koowaad ka hor doorashooyinka. CIRC waxay sii waday inay hogaamiso qaar dadaallada Codbixinta Ka Bax iyadoo la sameeyay guddi ay xubintu hogaamiso si loo abuuro a fiidiyowga ka-qaybgalka muhaajiriinta iyo qaxootiga taas oo si ballaadhan loo qaybiyey dhammaan toddobaadyadii u dambeeyey ee Oktoobar taas oo horseed u ahayd doorashadii madaxweynaha ee 2020. Fiidiyowgu wuxuu ku wargaliyay muhaajiriinta u qalma iyo kuwa cod bixiya ee PoC ee Colorado wixii ku saabsan awooda codkooda iyo muhiimadda ay leedahay ka qaybgalka dimuqraadiyadda. Waxaa loo qaybiyay warbaahinta bulshada, raadiyaha, iyo iyada oo loo marayo saamiyada xubnaha ee lagu bartilmaameedsanayo cod-bixiyeyaasha hoose iyo kuwa dhexe. Fiidiyowga waxaa lagu wadaagay emayl ahaan qayb ka mid ah "Ka Bax Qalabka Qalabka Codbixinta" oo sidoo kale ay ku jiraan sawir-qaadis ku saabsan sida looga codeeyo Colorado, dhiirrigelinta xigashooyinka ka-qaybgalka cod-bixiyeyaasha, tirakoobka ku saabsan cod-bixiyayaasha New American, iyo hagaha tallaabooyinka cod-bixinta ee aan taageernay. Warbixintii ugu dambeysay waxay muujisay inay heysatay wax ka badan 814,795 aragti iyo gaari 92,145.
Sababtoo ah COVID, qabanqaabiyaasha gobolka ee CIRC waxay ku khasbanaadeen inay joojiyaan dhacdooyinka shaqsi ahaaneed ayna abaabulaan caawimaad dijitaal ah iyo munaasabado fidin ah oo ku saabsan Zoom iyo Facebook, iyagoo gaaraya boqolaal daawadayaal ah Qabanqaabiyahayaga Gobollada Woqooyi wuxuu sidoo kale taageero ka geystey dhacdooyinka baabuurta ee 2 Drive-Thru, oo gaarey illaa 350 qof qof ahaan. Qabanqaabiyahayaga Mountain wuxuu sidoo kale abaabulay dhacdo baabuur oo loo yaqaan 'Drive-Thru car' oo gaadhaysa 150 qof. Maaddaama qoysaska badankood ay ku hadlayeen Isbaanishka, qabanqaabiyeyaasha gobolku waxay uga jawaabeen su'aalahooda waxayna sharraxeen muhiimadda ay leedahay buuxinta tirakoobka Isbaanishka.
CIRC sidoo kale waxay soo saartay a video ku saabsan Tirakoobka bartilmaameedsaday soogalootiga iyo qaxootiga ku adag in la tiriyo aagaga guud ahaan Colorado. Fiidiyowgaan waxaa la daawaday 3,800 jeer. CIRC waxay sidoo kale abaabushay laba banki taleefan oo tirakoob ah waxayna la xiriirtay 625 qof. Bishii Ogosto, Kooxdayada Comms waxay abaabuleen Bisha Tirakoobka Waxqabadka waxayna diyaariyeen a tirakoobka qalabka dijitaalka ah si loo baro bulshada guud ahaan iyo bulshooyinka soogalootiga ah gaar ahaan. Waxaan si ballaaran ugu baahinnay baraha bulshada waxaanna u dirnay qaraxyo emayl ah macaamiisheenna. Qaar ka mid ah qoraallada tirakoobka waxay ahaayeen xusuus, taas oo noo oggolaatay inaan la hadalno dhagaystayaal da 'yar. Qoraaladeena baraha bulshada ee tirakoobka waxay kasbadeen 55,282 aragtiyo laga soo bilaabo Maarso ilaa Sebtember.
Jinsiyadda Ayaa Ka Bilaabmaysa Halkaan
Sanadkii 2020, waxaan u adeegnay in kabadan 1,500 oo qof anagoo siinay la-talin sharci iyo caawimaad codsiyada dhalashada, cusboonaysiinta DACA, codsiyada kaarka cagaaran, iyo taageerada LLC. Tan waxaa ku jiray 441 ncodsiyada bixinta, 275 DACA cusboonaysiinta, 89 codsiyada kaarka cagaaran, 183 codsi oo loogu talagalay taageerada LLC, 550 la-talin sharci, iyo 9 aqoon isweydaarsiyo muwaadinimo. Doorashadan hore, 105 muwaadin oo CIRC ku taageertay hanaanka dhalashada ayaa u codeeyay.
Qaar badan oo ka mid ah dadka aan u adeegno waxay leeyihiin helitaan kooban ee tikniyoolajiyadda iyo ilaha internetka. Kuwa haysta taleefannada casriga ahi waxay badanaa leeyihiin xog kooban waxayna ku tiirsan yihiin Wi-Fi dadweynaha si ay u adeegsadaan aaladooda. COVID dartiis, CIRC waxay biloowday mashruuc diiradda lagu saaray waddan-qaadashada fog iyadoo laga kireysanayo kiniinnada loo yaqaan 'Sprint' ee loo yaqaan 'Sprint tablets' degganayaasha Joogtada ah ee Sharciga ah ee u diyaarka ah in ay waddaniyadda yeeshaan. Kiniiniyadu waxay siinayeen shakhsiyaadka teknolojiyad, marin u helka internetka, iyo fiidiyowyo casharro hore loo sii geliyay oo ku baxa luqado kala duwan taas oo u saamaxday inay foomka N400 iskaa u buuxiyaan iyagoo u maraya Citizenshipworks.
Xuquuqda iyo Wax-iska-caabbinta
Khadka tooska ah ee ICE: Shabakadda Jawaabta Degdegga ah ee Colorado (CORRN) iyo Docuteam waxay u shaqeeyaan si ay u caawiyaan kuwa ay bartilmaameedsanayaan ICE. Sanadkii 2020, CORRN waxay heshay 94 wicitaan khadkayaga waxqabadka ee ICE, waxay siisay jawaab deg-deg ah muhaajiriinta dhibaataysan, xog uruurisay, waxayna kajawaabtay xoojinta ICE iyadoo loo marayo iskuxiradeeda in kabadan 1,000 mutadawiciin ah. CIRC's Docuteam waxay kajawaabtay dhamaan wicitaanada khadka tooska ah ee aan degdega ahayn, waxay diiwaan galisay sheekooyinka 41 xubnood ee bulshada dhexgalka 'ICE', waxayna abaabushay 3 kulan oo lala yeeshay shariifyada.
CIRC waxay ku faantaa inay ka mid tahay CORRN, oo ay weheliso AFSC, COPA, Mi Familia Vota, Padres y Jóvenes Unidos, To Wada Colorado, iyo UNE.
Ogow Aqoon-isweydaarsiyada Xuquuqdaada: Ogow tababbarkaaga Xuquuqdaada wuxuu ka caawiyaa xubnaha bulshada inay fahmaan xuquuqdooda markii la soo qabto xarig. CIRC waxay ka qabatay aqoon isweydaarsiyo gobolka oo dhan, iyadoo hubeysay in ka badan 200 oo qof oo leh aqoon muhiim ah.
Barnaamijka SB 251: Sanadkii 2020, waxaan sii wadnay inaan taageerno shaqadan waxaanan ka caawinay 410 qof oo ku nool aagga Denver helitaanka laysanka darawalnimada.
Beddelidda sharciyada si loo beddelo nolosha
CIRC waxaa ka go'an inay hubiso in saraakiisheenna la doortay ee Colorado ay taageerayaan soogalootiga iyo qaxootiga. Qayb muhiim ah oo ka mid ah shaqadeena waa u doodista sharci kor u qaada dadkan. Waxaan ku faraxsanahay inaan soo sheegno in 2020 ay ahayd sanad kale oo guulo sharci-dejin ah.
Guulaha muhiimka ah ee sharci dejinta ee 2020:
Waxaa lagu taageeray marinka SB20-083 "Mamnuuca Xarigga Madaniga ee Maxkamad", iyadoo laga ilaalinayo Coloradans aan sharciyeysnayn in lagu xiro laanta socdaalka haddii ay gudaha ku jiraan, baxayaan, ama imaanayaan ama ka imaanayaan maxkamad. Xubnaha CIRC's Docuteam waxay markhaati ka siiyeen SB20-83 waxayna isugu keeneen xubnaha bulshada inay ka soo qayb galaan.
Kadib cadaadis weyn iyo abaabul ay sameeyeen Isbahaysiga I Drive, Meyer Law Office iyo Senator Julie Gonzalez, Gudoomiyaha Polis wuxuu saxeexay hagitaan fulineed oo ku saabsan asturnaanta xogta May 20, 2020. Tilmaamaha fulinta ee asturnaanta xogta waxay hubinaysaa in waaxyaha fulinta iyo hay'aduhu leeyihiin siyaasado ilaalinta macluumaadka macaamiisha iyo asturnaanta, oo ay ku jiraan marka la qabanayo codsiyada macluumaadka ee ka socda hay'adaha dowladda federaalka sida ICE.
Ololahayaga Sanduuqa Difaaca Sharciga wuxuu kasbaday culeys muhiim ah wuxuuna ladhacay hogaamiyayaasheena sharci dejinta, oo ay kujirto taageerada xafiiska Badhasaabka. Waxaan ka helnay Magaalada Denver inay $ 500,000 u gasho Sanduuqa Adeegyada Sharciga ee Muhaajiriinta Denver. Ma awoodno inaan soo bandhigno biil sannadka 2020, sidaa darteed waxaan diiradda saareynaa qaab maxalli ah oo lagu dhisayo xawaare waxaana la shaqeyneynay dowladaha hoose ee Aurora, Boulder, iyo Fort Collins si aan u dhisno taageerada kheyraadkan muhiimka ah.
Waxaan taageernay marinka SB20B-002 - Guriyeynta Iyo Tooska COVID Gargaarka Degdegga ah bishii Diseembar 2020. Sharcigan wuxuu siinayaa $ 54 milyan oo gargaar deg-deg ah oo deg deg ah, $ 1 milyan oo gargaar sharci ka saarid ah, iyo $ 5 milyan shaqsiyaadka aan u qalmin noocyada kale ee gargaarka, sida caymiska shaqo la'aanta, kaalmada cuntada ama hal mar oo ah $ 1,200 oo laga bixiyo dowladda federaalka.
CIRC waxay xireysaa horumarinta hoggaaminta qayb kasta oo ka mid ah shaqadeena. Qaar badan oo ka mid ah kuwa sida tooska ah saamaynta ugu leh waxay ku dambeeyaan inay noqdaan xubno CIRC ah, oo u adeegaya guddiga, kuna biiraya shaqaale, iyagoo ku markhaati furaya sheekadooda shaqsiyeed hortooda wakiillada gobolkooda iyo qarankooda, iyo xitaa u tartamida iyo ku guuleysiga xafiis dowladeed.
200 + kaqeybgalayaal Latinx ah ka imid dhammaan Colorado waxay isugu yimaadaan Xarunta Dawladda ee Latino / Maalinta U-doodista, oo CIRC ay wada-hawlgalayaal tahay.
150 ergo oo ka socda ururadayada xubinta ka ah 90+ ayaa isugu yimid shirkii sanadlaha ahaa ee xubinta, kaas oo dhacay shiidaa markii ugu horeysay. CIRC waxay abaabushay tababaro ku saabsan Anti-madow; ICE ka baxsan Colorado— Dib u celinta booliisku door ma ka ciyaaraa ?; Qoraalka deeqda, u adkaysiga maxaliga ah inta lagu gudajiro aafada, abaabulka bulshada xilliyada dhibaatooyinka; Sanduuqa Difaaca Sharciga; iyo kuwo kale.
In ka badan 50 hogaamiye beeleed si firfircoon uga qaybqaateen CIRC's Fund Defence Fund, I-Drive, iyo guddiyada hagidda Federaalka.
CIRC waxay samaysay a guddiga uu hoggaamiyo xubintu in la abuuro fiidiyow ka-qaybgalka muhaajiriinta iyo muhaajiriinta muhaajiriinta ah oo si ballaadhan loo qaybiyey toddobaadyadii u dambeeyey ee Oktoobar ee doorashada horseeday.
Bishii Ogosto, CIRC waxay abaabushay a tababarka isgaarsiinta nidaamka deegaanka ee saamaynta, fariimaha saamaynta, qaabaynta sheekooyinka, iyo farriimaha ku saleysan qiimaha. Bishii Sebtember, CIRC waxay qabanqaabisay tababar ku saabsan “Sidee biilku sharci u noqonayaa”. Bishii Oktoobar, waxaan iskaashi la yeelanay CIRC Action Fund si aan u sameyno a burburka codbixinta tallaabooyinka aan taageernay. Waxaan sidoo kale qabanqaabinnay tababar ku saabsan "Sida loo helo kulan sharci dejin wax ku ool ah & Fariimaha ku saleysan fariimaha". Bishii Nofeembar, waxaan sidoo kale fududeynay tababar ku saabsan "Sharci dejinta Colorado 101".
Xubnaha CIRC waa mashiinka dhaqaajiya himiladeenna, waxaana si isdaba-joog ah ugu hoosaynay shaqada cajiibka ah ee ay maalin kasta ka qabtaan gobolladooda soogalootiga ku nool Colorado. Sanadkii 2020, xitaa iyadoo ay jiraan duruufo qoto dheer oo caqabado leh, xubnaheennu waxay waxyaabo aan caadi aheyn u sameeyeen bulshadooda shanta gobol ee gobolka oo dhan.
Xubno muhiim ah:
Jiirada Galbeed: The Mashruuca Arimaha Isbaanishka (HAP) waxay u adeegtaa bulshada soo galootiga ah ee Galbeedka Giriigga. Intii lagu gudajiray aafada, HAP waxay balaarisay barnaamijkooda caawinta sharciga ee socdaalka iyagoo kordhiyay tirada dadka ay u adeegaan 25%, iyo abuurista Sanduuqa Galbeedka Colorado Immigrant Relief Fund. HAP waxay awood u yeelatay inay siiso ilo muhiim ah iyo caawimaad toos ah 100 qoys oo aan sharciyeysnayn sanadka 2020 iyadoo u doodaysay iyaga sharci dejiyeyaasha iyo wakaaladaha maxalliga ah.
Gobolka Buurta: AJUA (Asociación de Jóvenes Unidos en Acción / Association of Youth United in Action) waa urur ay hogaamiso dhalinyarada, xuquuqda muhaajiriinta iyo u doodida cadaalada bulshada oo dhiiri galisa helitaanka iyo ka qaadista caqabadaha waxbarashada ee bulshada soogalootiga ah. AJUA waxay taageertaa ardayda aan dukumintiga lahayn si loo xaqiijiyo himilooyinkooda waxbarasho iyo shaqo iyadoo la dhisayo xiriirka ka dhexeeya soogalootiga iyo bulshadooda. Sanadkii 2020, AJUA waxay gacan weyn ka geysatay bixinta taageerada aadka loogu baahnaa ee ku saabsan wadayaasha cuntada ee degmada Garfield xilligii safmarku socday. Shaqadooda adag waxay u mahadcelinayaan dhalinyarada xiisaha leh ee ka kooban ururka.
Gobolka Woqooyi: Centennial BOCES waxay ka wadaan Barnaamijka Tacliinta Muhaajiriinta 14 degmo dugsiyeed oo ku baahsan Waqooyiga Colorado. Sannadkii 2020, BOCES waxay ku kacday caqabadda aafada iyada oo siyaabo gaar ah loo martigeliyey munaasabadaha bulsho-fog "wad-ilaa" dhacdooyinka si loo wadaago kheyraadka iyo Ogow Xuquuqdaada macluumaadka, u dabbaaldegyada ciidaha sida "Día de los niños", iyadoo dadka loo diiwaangelinayo P-EBT gargaarka, u gudbinta qoysaska kheyraadka degdegga ah ee COVID-19, iyo in ka badan. Laga soo bilaabo Estes Park ilaa Yuma, BOCES waxay awood u yeelatay inay dhoola cadeyso dhamaan wajiyadayada.
Gobolka Koonfurta: Noraly Hernandez waxay xubin ka ahayd aasaaskii Lamar Unidos, halkaas oo ay si joogto ah uga abaabuli jirtay una taageeri jirtay bulshadeeda. Waxyar ka dib markii uu cudurku bilaabmay, Noraly wuxuu arkay qaababka ay muhaajiriinta si aan habooneyn iyo nidaam ahaanba saameyn ugu yeesheen. Iyadoo ay weheliso xubno kale oo ka tirsan Lamar Unidos, waxay iyadu horseed ka ahayd dacwadda abaabulka iyo bixinta gargaarka tooska ah ee muhaajiriinta ku dhibtoonaya miyiga, Koonfur-bari ee Colorado. Bishii Janaayo 29, 2021, Noraly wuxuu u dhintey dhibaatooyin caafimaad. Lamar Unidos iyo CIRC waxay waligood maamuusi doonaan Noraly tamarta iyo dhaxalka.
Gobolka Denver: Ururka Colorado ee Fursadda Latina iyo Xuquuqda Taranka (COLOR) wuxuu u dagaallamaa caafimaadka taranka haweenka Coloradan ee midabka leh. Sanadka 2020, COLOR waxay iskaashi la sameysay shirkada Lyft iyo CIRC si ay u siiso gaadiid bilaash ah waxyaabaha daruuriga u ah xubnaha bulshada si looga jawaabo aafada. Waxay awoodeen inay taageeraan 290 shaqsi oo u baahan safar si ay u aadaan shaqada, u soo iibsadaan raashinka, u booqdaan bixiye daryeel caafimaad iyo in ka badan.
Runta kor u qaad
Nativism iyo nacaybka ajaanib nacaybka waxaa shiday sheekooyin waxyeelo iyo been abuur ah oo ku saabsan soogalootiga iyo qaxootiga. CIRC waxay ku dadaaleysaa inay la dagaallanto tan iyada oo kor u qaadaysa sheekooyinka dhabta ah ee bulshada si ay runta uga sheegto soogalootiga ku nool guud ahaan Colorado iyo Mareykanka. Iyada oo loo marayo khadka tooska ah, telefishanka, iyo daabacaadda, wacyigalintayada ayaa sii kordheysa sanad kasta iyada oo keeneysa xaqiiqooyin run ah iyo sheekooyin dhiirigelin u leh wacyiga bulshada.
Sannadkan, CIRC waxay ku guuleysatay 242 daabacaad warbaahineed oo la kasbaday, wadar ahaan $ 149,000 qiime ahaan; waxaan u kordhinay liiska macaamiisheenna emailka oo aan ka koobnay 8,324 qof; waxaan heysanay 26,244 taageerayaal Facebook dhamaadka sanadka; celcelis ahaanna baraha bulshada ee aan gaarnay waxay ahayd 226,825 qof.
Dakhligayagu wuxuu ka yimid ilaha soo socda:
Aasaaska - 84%
Deeq-bixiyeyaasha shaqsi - 7%
CIRC Qiimaha wadaagga qiimaha - 6%
Dhacdooyinka gaarka ah - 1%
Dakhliga kale - .7%
Ku darsiga ururada - .6%
Kharashka adeegga - .5%
Lacagta xubinnimada - .3%
Kharashyada barnaamijkayagu waxay ku dhaceen qaybaha soo socda:
Kaqeybgalka bulshada - 27%
Abaabulka Bulshada - 20%
Comms - 13%
Golaha - 9%
Cadaadiska ICE - 7%
Adeegyada sharciga - 7%
Sanduuqa Difaaca Sharciga - 5%
Xirfadle xirfadle - 4%
Guddi - 4%
Tirakoobka - 2%
Liisamada wadista - 2%
Dib-u-habeynta Fed Immig - 1%
Caddaaladda soogalootiga waxay ku sii socotaa Colorado iyadoo gacan ka heleysa deeq-bixiyeyaashayada iyo deeq-bixiyeyaasha fahamsan sida ay shaqadeennu muhiimka u tahay. Bulshooyinkeena soogalootiga ahi waxay ku barwaaqoobaan markay ku noolaan karaan bulsho soo dhawaynaysa, xor ah, oo cadaalad ah. Waxaan si diirran ugu mahadcelineynaa kuwa nagu taageeraya dagaalka si tan looga dhabeeyo.
Bakhaarka Buugga Buugga
Shirka Boulder ee Bulshada Diinta ee Asxaabta
Aasaaska Qoyska Brett
Aasaaska Beesha California
Xarunta Isbedelka Bulshada
Xarunta Horumarka Caafimaadka
Machadka Lacagta ee Colorado
Ururka Caafimaadka ee Colorado
Aasaaska Beesha Boulder County
Kaniisada Beesha ee Midoobey ee Masiixa
Kaniisadda Koowaad ee Kulliyadda Boulder
Gateway Fund II ee Denver Foundation
FE iyo SB Payne Foundation
Afar Sanduuq Xorriyadeed
Aasaaska Adeegga Guud
Sanduuqa Guenther ee aasaaska bulshada
Dunida Cabitaanka Hazel
Colorado Gaajo Bilaash ah
Xarunta Kheyraadka Sharciga ee Muhaajiriinta
Aasaaska Beesha Latino ee Colorado
Ururka Haweenka Codeeya ee Degmada Boulder
Sanduuqa Merle Chambers
Xafiiska Meyer Law
Xafiiska Sharciga ee Milstein
Xarunta Sharciga Socdaalka
Iskaashiga Qaranka ee Mareykanka Cusub
Sanduuqa Qoyska ee Norris
Cunnooyinka Diyaarka ah
Aasaaska Samafalka Renaissance
Sanduuqa Qoyska ee Rogers-Berman
Aasaaska Beesha Rose
Hantida Bulshada ee Silicon Valley
Ururka Aasiyada Koonfur Aasiya ee Colorado
Sanduuqa Michael Kalan Memorial Fundation ee InFaith Community Foundation
Barnaamijka Gargaarka Midnimada Midnimada Universal ee Kuyaala Xarunta Hoyga Rock
Kaniisada UU ee Boulder
Machadka Vera ee Caddaaladda
Waxaan ku dadaalnaa inaan sida ugu macquulsan ugu saxno liistada deeq-bixiyeyaasha hadda jira. Haddii aan khalad sameynay, fadlan nala soo socodsii adigoo wacaya 303-922-3344 ama emayl marine@coloradoimmigrant.org.
Tilmaame-bixiye Shakhsiyeed: Susan Moore
Susan Moore waxay ku nooleyd kana shaqeysay beer caano oo ku taal Fort Collins qurux badan muddo ku dhow afartan sano. La shaqeynta shaqaalaha soo galootiga ah waxay siisay waxbarasho ku dhow cunsuriyadda Mareykanka waxayna ka dhigtay inay ka shaqeyso caddaaladda bulshada.
Qeyb ka mid ah shaqadani waxay ka dhigan tahay taageerida howlgalka CIRC adoo ku deeqaya. Barnaamijka CIRC ee SB-251 si loo siiyo Coloradans aan sharciyeysnayn ruqsadaha darawalnimada iyo sidoo kale shaqadayada la dagaallanka midabtakoorka iyo u dagaalanka caddaaladda ayaa ah waxa ku dhiirrigelinaya Susan inay bixiso. Deeqsinimadeeda awgeed, shaqadeennu way sii socon kartaa.
ku biir ah CIRCle of Asxaabta adoo iska diiwaangelinaya tabarucaad soo noqnoqda. Ku deeqidaadu waxay gacan ka geysan doontaa taageeridda howlgalka CIRC ee lagu hagaajinayo nolosha muhaajiriinta iyo qaxootiga iyadoo laga dhigayo Colorado gobol soo dhoweyn iyo soo dhoweyn soogalooti leh
Siyaabo kale oo loogu biiro:
Ma waxaad tahay shaqaale federaal ah?
The Isku-darka Ololaha Federaalka (CFC) waa kan ugu weyn uguna guusha badan shaqada goobta sadaqada sadaqada adduunka. CFC waa hay'adda kaliya ee idman ee samafalka ah ee ka codsata shaqaalaha Federaalka goobahooda shaqo. CFC waxay u qaabaysan tahay taageerida iyo kobcinta samafalka iyada oo loo marayo barnaamij iskaa wax u qabso ah oo qiime jaban isla markaana wax ku ool ah siinaya dhammaan shaqaalaha Federaalka fursad ay ku saameeyaan danaha samafalka ee CFC ee ay doorteen. Xeerka CFC: 50563
Bilow olole goobta shaqada ah
Saamiyada Beesha wuxuu ku xiraa Coloradans hay'adaha samafalka iyo sababaha ay aadka u daryeelaan. Ololeyaasha siinta goobta shaqada waxay fursad siinayaan shaqaalaha iyo hoggaanka shirkadda si ay uga wada shaqeeyaan wadashaqeyn sanadle ah si loo dhiirrigeliyo maalgashiga bulshada samafalka ah. Siinta ololeyaashu waa baashaal iyo dhisme kooxeed, ka mideeya shaqaalaha shirkadda ujeeddo guud. Ku martiqaadida shaqaalaha inay wax ku bixiyaan tabarucaadka mushaharku waa faa iidada kordhinaysa saamaynta togan ee shirkaddu ku leedahay bulshada iyadoo la ixtiraamayo rabitaanka shaqaaluhu doonayo inuu muujiyo naftooda iyaga oo dooranaya dadka samafalayaasha ah ee samafalayaasha ah.
Colorado Waxay Siisaa Maalin
Ku biir Colorado Waxay Siisaa Maalin, mid ka mid ah dhaqdhaqaaqyada wax siinta hal-maalin ee ugu weyn dalka. Diisambar kasta, Coloradans waxay isugu yimaadaan himilada guud si loo xoojiyo bulshada iyagoo gacan ka geysanaya xoojinta ururada aan macaash doonka ahayn. Community First Foundation iyo FirstBank oo iskaashi ka dhigaya inay maalintani abaal marin siiso bixiyeyaasha, kuwa aan macaash doonka ahayn iyo bulshada guud ahaan. Urur kasta oo aan macaash doon ahayn oo qaata tabarruuc Maalinta Colorado wuxuu bixiyaa qayb ka mid ah sanduuqa, isagoo kordhinaya qiimaha doolar kasta oo lagu deeqo.
Ku dhaji deeqaha yar-yar ee 'Roundit'
Sii isbeddelkaaga firaaqada ah ee 'CIRC' adoo leh Wareega: hab deg deg ah, fudud, ammaan ah oo lagu taageerayo shaqadeena. Sida ay u shaqeyso: marka koontadaada la furo, Roundit waxay soo koobi doontaa isbeddelka ka yimaada iibsashadaada maalin kasta si loogu deeqo CIRC. Waad beddeli kartaa inta la soo koobayo ama waxaad dejin kartaa xaddiga bixinta bil kasta wakhti kasta
Ku xidh asxaabta
Ku marti qaado qaadhaan ururin barta warbaahinta bulshada aad ugu jeceshahay una ogeys saaxiibadaa iyo qoyskaaga wax ku saabsan CIRC! Lacag aruurinta Facebook ama barnaamijyada kale ayaa ah hab fudud oo aad u wanaagsan oo saaxiibbadaada iyo qoyskaaga looga dhigo kuwo firfircoon kana qeybqaata taageerada himilada iyo yoolalka CIRC.
Ma dooneysaa inaad baashaal sameyso oo lacag aruuriso
Ku marti qaado qaadhaan ururin gurigaaga ama makhaayada leh boqolkiiba dakhliga ka faa'iideysta CIRC.
Wax siinta qorsheysan
Iyada oo loo marayo qorsheynta hadiyadaha, waxaad ku dooran kartaa habka wax bixinta ee ilaalinaysa baahida qoyskaaga isla markaana bixisa canshuur badan. Ku-deeqaha saamiyada ayaa kuu oggolaanaya inaad taageerto CIRC adoo iska ilaalinaya bixinta canshuurta faa'iidada raasumaalka ee saamiyada kasta oo la qadariyo, kordhinta saameynta hadiyaddaada.
Wax badan kuma guuleysan lahayn 2020 la'aanteed isbahaysiga xubinnimada. Xubnahayagu waxay sameystaan ​​koox dhaqamo kaladuwan oo qaran iyo maxalli aan faa'iido doon ahayn, kooxaha bulshada, ururada caqiidada, aasaaska iyo la-hawlgalayaasha u ololeeya dhammaan Colorado iyagoo hubinaya in shaqadeennu gaarto qayb kasta oo gobolka ka mid ah.